Antarktika : Bilaogera Avy Ao Amerika Latina Tonga Any Amin’ny Tendrontany Atsimo, Faritra Mangatsiaka Indrindra Eto An-tany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Mey 2018 3:28 GMT
Vakio amin'ny teny Español, srpski, Français, Nederlands, বাংলা, 简体中文, 繁體中文, Português, English
Ny tontolo mamirifiy any amin'ny Antarktika angamba no tsy isalasalàna fa toerana farany indrindra eritreretina hahitàna bilaogera. Nefa dia nisy azo nisaina tamin'ny rantsan-tànana ry zareo avy ao Amerika Latina no babon'ny hevitra hizara ny zavatra niainany, ny dia ary ny asa atao any amin'io tanibe babangoana io. Ny sasany tena avy any amin'ny Antarktika mihitsy no manoratra ny bilaoginy, mametraka ho an-tserasera ireo saripika sy lahatsary mba hanampiana ireo mpamaky azy hahatakatra izany hoe miaina lavitra ny tany niaviana izany ; ny sasany indray miandry ny fiverenany any amin'ny tanibe amerika atsimo vao milaza ny heviny any anatin'ny bilaoginy manokana na iraisana.
Marobe ireo firenena voasolo tena ety anaty tontolon'ny bilaogy miresaka momba ny Antarktika. Shily, ankoatra ny tranonkalan'ny ivontoerana shiliana ho an'ny Antarktika [esp], dia mamoaka vaovao ao amin'ny bilaogy Antarctic Air Base Presdent E. Frei M [esp]. Saingy indrisy, lahatsoratra iray ihany no nivoaka tao amin'ilay bilaogy, natokana indrindra indrindra ho an'ny fifandraisana amin'ny ‘radio’. Atokan'i Roberto Bravo Vidal ny bilaoginy Terra Australis Incognita [esp] ho an'ireo torohay sy fanadihadiana mifandraika amin'i Antarktika.
Efa maherin'ny roapolo taona i Però no miasa sy manao fikarohana mainga avy any amin'ny toby siantifika ao Machu Picchu [ang], tantanan'ny ivontoerana peroviàna ho an'i Antarktika ary atolotra ao amin'ny bilaogy Vida y Futuro [esp], iray amin'ireo bilaogin'ny gazety El Comercio. Farany, ilay peroviàna mpanatontosa sarimihetsika, Humberto Saco, dia nametraka ety an-tserasera ny fanadihadiana iray notontosainy momba ny fisian-dry zareo peroviàna ao amin'ilay tanibe mangatsiaka [esp].
Sarin'ilay prisme de glace nopihana nandritra ny iraka Antarkos 23 ary nahazoana alàlana ny fampiasàna azy
Ao amin'ilay bilaogy faharoa, ilay Orogoaiàna Waldemar Fontes mitantara ny fomba nataon'ny ekipany ho fankalazàna ny Noely [esp] tao amin'ny toby siantifika ao Artigas:
Sarin'ny sakafon'ny Noely tao amin'ny toby siantfika tao Artigas, nopihana nadritra ny Antarkos 25 ary nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.